Iindaba - Umthengi wabathengi baseJamani uShengyu Metal
Umthengi waseJamani utyelele uShengyu Metal
Kwixesha elipheleleyo lethemba leNtwasahlobo, i-Dongying Shengyu Metal Product CoLtd. iindwendwe ezamkelweyo ezivela eJamani, injineli uDavid kunye nabalingane bakhe beza kutyelela umzi-mveliso wethu kwaye banethemba lokuseka ubudlelwane bokubambisana.
Emva konxibelelwano, Nks. Umphathi jikelele we-Ji kunye nenjineli yethu ehamba noDavid watyelela iindibano zocweyo. Bahlalutya inkqubo kunye netekhnoloji yeemveliso. Bathetha kakhulu ngendibano yococeko lukaShengyu kunye nezixhobo eziphambili, kwaye bavakalise ukoneliseka ngumsebenzi obalaseleyo weemveliso zika Shengyu.
Ngolu tyelelo, injineli yaseJamani uDavid ebengenalo nje ulwazi oluphakamileyo ngesicwangciso senkampani yokuphucula, inkcubeko yokusebenza kunye nendlela yokusebenza kweshishini, kodwa wayenentembelo nenkxaso engakumbi kwinkampani, kwaye wayenentembelo enkulu ekwandeni kweemveliso eziveliswe yiDongying I-Shengyu Metal Products Co, Ltd kwintengiso yengingqi yendawo. Baza kujonga phambili kwintsebenziswano phakathi kwala macala mabini. Siyakholelwa ukuba ngenzame zokudibana kukaDongying Shengyu kunye namaqabane aseJamani abathengi, siya kuba nakho ukufikelela kwiziphumo ezilungileyo!
Ixesha lokuposa: Jun-16-2020